कोरोना प्रभाव: थला परे एयरलाइन्स, पार्किङ खर्च धान्नै धौधौं
Sat, Jun 6, 2020 at 12:06am
बुधबार, १९ चैत्र २०७६,	आहाखबर	2.24K
काठमाडौं, १९ चैत । कोरोना महामारीका कारण संसारभर सम्पर्क सञ्जाल विच्छेद भएपछि विमान कम्पनीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । धेरैजसो हवाई कम्पनी दुई महिनादेखि ठूलो घाटा व्यहोरिरहेका छन् । विमानस्थलको पार्किङ खर्च धान्न पनि उनीहरूलाई धौधौ छ ।
विश्वको एकचौथाइ जनसंख्या यति बेला लकडाउनमा छ । कोरोना महामारी साम्य भएर आममानिस विश्वस्त भई यात्रा गर्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। महामारीसँग जुझिरहेका मुलुकले बाह्य उडान मात्र होइन, आन्तरिकसमेत ठप्प बनाएका छन् ।
एयरलाइन्सहरूले सन् २०२० को जनवरीयता मात्रै २५२ अर्ब अमेरिकी डलर घाटा व्यहोरेको नयाँ प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आएटा) ले सार्वजनिक गरेको छ । आएटाले एयरलाइन्स कम्पनीको पुनःस्थापनामा लामो समय लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।
आएटाका अनुसार मे महिनासम्म अहिलेकै अवस्था लम्बिरहेको खण्डमा विश्वका सबैजसो विमान कम्पनी टाट पल्टिने छन् । अमेरिकी हवाई सेवा कम्पनी अमेरिकन एयरलाइन्सले यसका कर्मचारीको रोजगारी संरक्षणका लागि भन्दै सरकारसँग १२ अर्ब डलर सहायता माग गरेको छ ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स कम्पनीले सरकारसँग सेप्टेम्बर ३० सम्म ६ अर्ब डलर अनुदान र बाँकी ६ अर्ब ऋणमा माग गरेको हो । अमेरिकी सरकारले २० खर्ब डलरको राहत प्याकेजमध्ये ५० अर्ब डलर एयरलाइन्स कम्पनीको उत्थानका लागि छुट्याएको छ । हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको अमेरिकाका सबै आन्तरिक विमान कम्पनीले कोरोना महामारी सुरु भएयता ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, ब्रिटिस एयरवेजले कर्मचारी निष्काशन गर्न बाध्य हुने बताएको छ । सीईओ एलेक्स कुर्जले ४५ हजार कामदारलाई ब्रिटिस एयरवेज बचाउन ठूलो दबाब उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, जर्मनीको विमान कम्पनी लुफ्थान्साले दुईतिहाइभन्दा बढी उडान कटौती गरेको छ । यसका ८ सय विमान ग्राउन्डेड छन्। लुफ्थान्सा ग्रुपका कार्यकारी कास्र्तन स्पोरले अमेरिका, चीन, इजरायल, इरान तथा विभिन्न युरोपेली देशमा गरी ३० हजार उडान रद्द गरिएको बताएका छन् । अमेरिकामा मात्रै लुफ्थान्साका ७० दैनिक उडान थिए । त्यस्तै, एयर फ्रान्सले भर्खरै १.१ अर्ब पाउन्ड चक्रीय ऋणका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यससँग अब जम्मा ५.५ अर्ब युरो मात्र कार्यशील पँुँजी छ ।
व्यावसायिक उडानमा ठूलो गिरावटका कारण पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स, स्पाइस जेट, नर्वे्जियन एयरलाइन्स, अमेरिकन एयरलाइन्स, स्काईवेस्ट, एयर एसिया, एसियन एयरलाइन्स, भर्जिन एसिस, कोरियन एयर, चाइना इस्टर्न र चाउन साउदर्नलगायतले सरकारबाट यथोचित सहयोग नपाए छिट्टै टाट उल्टेको घोषणा गर्न बाध्य हुने बताइएको छ ।
भारतमा २१ दिने लकडाउन सुरु भएयता उडान रद्द भएर धेरै एयरलाइन्स मारमा परेका छन्। भारतस्थित कापा–सेन्टर फर एभिएसनका अनुसार एयरलाइन्स उद्योग र यसमा आवद्ध सेवाले जुन ३० सम्म ३.३ अर्बदेखि ३.६ अर्ब डलर घाटा व्यहोर्ने अनुमान छ ।
ब्लुमबर्ग क्विन्टले उल्लेख गरेअनुसार स्पाइस जेट र इन्डिगोले मात्र क्रमशः १८ करोड ८० लाख डलर र ७३ करोड डलर घाटा खानेछन् । भारतीय विमान कम्पनीको उडानमा ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ । जुन महिनासम्म यो अवस्था लम्बिए इन्डिगोलाई सेवा निरन्तरता दिन धेरै अप्ठेरो पर्नेछ ।
टाटा ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएका विस्तारा र एयर एसिया इन्डियालाई पनि गाभेर एउटै कम्पनी बनाउन सुझाइएको छ । भारतमा चालु आर्थिक वर्षभर सरकारको योजनाअनुसार सरकारी विमान सेवा कम्पनी एयर इन्डिया बेच्ने योजना थाती रहने भएको छ । यो अवधिमा एयर इन्डियाको सञ्चालनका लागि मात्र ३० करोड डलर आवश्यक पर्नेछ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
लकडाउन अवज्ञा गर्दै बिहीबारदेखि व्यवसाय खुलाइदै
एडीबीले नेपाललाई दियो ३० अर्ब सहुलियत ऋण
दुई रुपैयाँबाट एकैपटक १२ रुपैयाँ पुग्याे डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार मूल्य
बजेट समाजवादोन्मुख र बजारवादको दोबाटोमा उभिएको जस्तो देखियोः डा बाबुराम भट्टराई
बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुको प्रतिक्रिया, कसले के भने ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा संसद्मा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै
कर्मचारी सञ्चय कोषले सुरु गर्‍याे अनलाइन सापटी सेवा
नेपाललाई एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दियो ३० अर्ब ऋण
नेपाल झण्डै साढे ११ खर्ब ऋणमा, प्रतिव्यक्तिको थाप्लोमा ३८ हजार ३४ रुपैयाँ ऋण
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
नेपालकाे नयाँ नक्सा प्रकरणपछि भारतद्वारा पाम निर्यातमा रोक
५५ प्रतिशतले घट्याे विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स
चेम्बरले दियो सरकारलाई बजेट बारे सुझाव
कोरोनाको कहरः कतार एयरवेजले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने
राष्ट्रपतिबाट ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै, रोजगारी र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा
बैंकिङमा कोरोना प्रभावबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा कार्यदल गठन
आगामी बजेट: २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
खुलेको १ घण्टामै सेयर बजारको सर्किट ब्रेक
नेपाल टेलिकमको ९ महिनामा आम्दानी ६७ करोड घट्यो
गिरफ्तार हुनुपरे आफू तयार रहेको टेस्ला प्रमुख मस्कको भनाइ
म्यानपावर व्यवसायीले मागे ४ अर्ब ३१ करोड धरौटी फिर्ता
झन्डै दुई महिनादेखि बन्द रहेको शेयर बजार आजदेखि खुल्ने
मन्त्रिपरिषदले तोक्यो लकडाउनमा सञ्चालन गर्न पाइने व्यवसाय
भारतबाट लकडाउनमा मात्र चार अर्बको तरकारी आयात
अनुदानमा पाइने नुनको मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ
नेपाली उत्पादनले धानेपछि घट्यो भारतिय तरकारीको आयात
कोरोनापछिको कृषिलाई प्राथमिकता दिन अर्थविद्काे सुझाव
कालोबजारी गर्ने वीरगञ्जका उद्योगपतिसहित पाँच जना पक्राउ
कति पुग्यो आज डलरको भाउ र अन्य देशको विनिमयदर ?
लकडाउनले तीन गुणा बढीले घट्यो काठमाडाैंमा तरकारीको मूल्य